Tallaabada xigta ee loo qaadayo mooshinka xil ka qaadista Trump oo la shaaciyay - BBC News Somali
Tallaabada xigta ee loo qaadayo mooshinka xil ka qaadista Trump oo la shaaciyay
Afhayeenka aqalka wakiillada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in Khamiista cod loo qaadi doono qorshahooda ku aaddan tallaabada xigta ee ay qaadayaan
Xildhibaannada ka soo jeeda xisbiga Dimuqraaddiga ee ka tirsan aqalka wakiillada Mareykanka ayaa soo bandhigay qorshahooda ku aaddan tallaabada xigta ee ay u qaadayaan dadaalkooda la xiriira sidii ay mooshin xil ka qaadis ah uga soo gudbin lahaayeen madaxweyne Donald Trump.
Mooshinka ayaa hadda noqon doona mid ay dadweynaha ka war-heyn doonaan marxaladaha uu marayo, waxaana hoggaamintiisa lagu wareejinayaa guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee aqalka, Adam Schiff.
Sidoo kale dhageysiga dacwadaha la xiriira eedeymaha loo jeedinayo madaxweynaha ayaa si toos ah loogu baahin doonaa shacabka.
Golahan ay aqlabiyadda ku leeyihiin xisbiga Dimuqraaddiga ayaa maalinta Khamiista ah cod u qaadi doona tallaabadan cusub.
Afhayeen u hadlay Aqalka Cad ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid "aan sharciga waafaqsaneyn".
Ilaa hadda, dhageysiga eedeymaha ka dhanka ah Mr Trump ayaa u socday hab qarsoodi ah oo ay albaabbada u xirnaayeen, balse hadda ka dib waxaa la damacsan yahay in loo fasaxo saxaafadda.
Codka loo qaadayo in hannaanka dacwadda laga dhigo mid shacabka u furan ayaa ah mid ku saabsan habka loo wadayo mooshinka, balse ma aha codbixin loo qaadayo in lasii wado mooshinka xil ka qaadista Trump iyo in kale.
Siyaasiyiinta xisbiga Jamhuuriga ayaa dimiqraaddiyiinta horay ugu dhaliilayay sii ambaqaadista dhageysiga kiiskan ee qarsoodiga ah, kaasoo ay sidoo kale jamhuuriyiintu ka qeyb qaadanayeen.
Hase ahaatee, xildhibaannada garabka Dimuqraaddiga ayaa ku adkeystay inay u baahnaayeen sidii ay caddeymo u aruurin lahaayeen ka hor inta aan hannaanka mooshinka loo bandhigin shacabka. Waxayna beeniyeen eedeymaha loogu jeediyay inay waxyaabo qarsoodi ah sameynayeen.
Maxaad kala socotaa Mooshinka xil ka qaadista madaxweyne Trump ee ay ku dhaqaaqeen xildhibaannada Dimuqraaddiga?
Trump oo caro kala dul dhacay dadka soo gudbiyay dalabka xil ka qaadistiisa
Madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay inuu isku dayay sidii uu dowladda Ukraine cadaadis ugu saari lahaa inay baaritaanno ku sameyso musuqmaasuq lala xiriiriyay siyaasiga loollanka kula jira ee lagu magacaabo Joe Biden iyo wiilkiisa.
Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, wiilkiisa wuxuu la shaqeyn jiray shirkad gaaska ku shaqo leh oo laga leeyahay Ukraine, taasoo lagu magacaabo Burisma.
Balse Mr Trump wuxuu iska fogeeyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Maxaa lagu sheegay Qorshaha?
Dukumiintigan oo ka kooban siddeed bog ayaa muujiyay in hannaaka mooshinka oo labo waji kala ah la guda gali doono.
Wajiga hore, guddiga sirdoonka ee aqalka wakiillada ayaa sii wadi doona baaritaannadooda waxayna kiiska u dhageysan doonaan si shacabka u furan.
Waxay guddigu xaq u yeelan doonaan inay dadweynaha usoo bandhigaan caddeymaha ay sida gaarka ah u helaan.
Diyaarinta mooshinka ka dhanka ah Madaxweyne Trump ayaa socotay in muddo ah
Wajiga labaad, warbixin aan qarsooneyn oo ku saabsan caddeymaha la helay ayaa loo gudbin doonaa guddiga dhinaca caddaaladda ee aqalka wakiillada, kuwaasoo sameyn doona hannaan u gaar ah oo ay u wajahaan hirgalinta mooshinka xil ka qaadista.
Qareennada madaxweyne Trump ayaa markaas loo oggolaan doonaa inay goob joog ka ahaadaan kulamada guddiga caddaaladda.
Waa maxay mooshinka xil ka qaadista?
Marka uu erayga "mooshinka xil ka qaadista" ku jiro mowduuca aan hadda ka hadleyno micnihiisu waa in dacwad la geeyo aqalka Congress-ka, taasina waxay abuuri doontaa maxkamadeyn ka dhan ah madaxweynaha oo gudaha aqalka lagu falanqeeyo.
Dastuurka dalka Mareykanka wuxuu dhigayaa "in madaxweyne mooshin xil ka qaadis ah laga keeni karo marka lagu helo dambiyada kala ah: Khiyaano Qaran, Musuqmaasuq ama laaluush qaadasho iyo waliba dambiyada kale ee kuwaas kasii waaweyn".
Hannaanka mooshinka xil ka qaadista waa inuu billaabo aqalka wakiillada wuxuuna u baahan yahay aqlabiyad fudud oo lagu ansixiyo. Laakiin maxkamadeynta waxaa lagu sameyn karaa aqalka odayaasha ee Senate-ka.
Laakiin markii halkaas la geeyo, in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo waxay u baahaneysaa codadka saddex meelood labo meel oo ka mid ah xildhibaannada - arrintaasna wali kama dhicin taariikhda Mareykanka.